डा. मिलन प्रकाश श्रेष्ठ, मुटुरोग विशेषज्ञ, ग्राण्डी अस्पताल
२०७३ असोज १९ बुधबार १५:४०:०० प्रकाशित
मदिरा पिउने बानी पनि फरक–फरक हुन्छ । केही काम नगर्नेहरु विहानैदेखि शुरु गर्छन् । कोहीकोहीलाई साँझ परेपछि अलिकति पिउनैपर्ने हुन्छ । कोही गुड फ्राइडे मात्र पिउछन् भने कोही साथीभाई भेटेपछि पिउनैपर्ने खालका हुन्छन् ।
कोही नियमित निर्धारित परिमाण पिउने स्वभावका हुन्छन् भने कोही पिएपछि मात्तिनैपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । मदिरा पिउने बानी भएका मानिसहरु अधिकांश मांशहारी नै हुन्छन् । भुटेको, तारेको, साँधेको मासुका परिकारहरु मदिरासंग मिठो पनि मानिन्छन् ।
हाम्रो समाजमा रक्सीको कुरामा डाक्टरहरुको दुइथरी भनाई अगाडि आउछन् । एकथरी खादै नखाने सल्लाह दिन्छन् भने अर्काथरी केही मात्रामा दिनहु खाने गरेमा शरीरलाई फाइदा नै गर्छ भन्ने गर्छन् । विरामी पनि त्यस्तै हुन्छन् । अलिअलि खाने बानीले राम्रै गर्छ भन्ने सल्लाहकै पछि लाग्छन् तर त्यो अलिअलि कति हो ? धेरै कमलाई मात्र थाहा हुन्छ । मैले दैनिक चेकजाँच गर्ने सिलसिलामा करीब पाँच प्रतिशत विरामी मात्र आफूलाई नियन्त्रणमा राखेर पिउने बानी भएको भेटेको छु ।
शुरुमा दुइ पेगमात्रै हो भनेर शुरु गर्ने अनि दुइपछि अलिकति अलिकति भन्दै बढाउदै जाने प्रवृत्ति पनि धेरै भेटिने नगरेको होइन । त्यसैले कुनै डाक्टरले पिउने सल्लाह दिन्छन् भने कति पिउने हो मात्रा पनि सोध्न र आफूलाई अनुशासनमा पनि राख्न जरुरी छ । आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिन्न भने त्यस्ता व्यक्तिले पिउने बानी छोडेकै राम्रो ।